Ahoana ny fomba hifandraisana am-pahombiazana amin'ny influencers | Martech Zone
Ahoana ny fomba fifampiresahana am-pahombiazana amin'ny influencers
Talata, Novambra 30, 2021 Talata, Novambra 30, 2021 Alexander Frolov
Ny marketing influencer dia lasa lafin-javatra lehibe indrindra amin'ny fampielezan-kevitra marika mahomby, mahatratra ny sandan'ny tsena $ 13.8 lavitrisa in 2021, ary antenaina hitombo ihany io isa io. Ny taona faharoa tamin'ny valan'aretina COVID-19 dia nanohy nanafaingana ny lazan'ny marketing influencer satria ny mpanjifa dia niantehitra tamin'ny fiantsenana an-tserasera ary nampitombo ny fampiasana ny sehatra media sosialy ho sehatra e-varotra.
Miaraka amin'ny sehatra toy ny Instagram, ary vao haingana TikTok, amin'ny fampiharana ny endrik'izy ireo ara-barotra ara-tsosialy, misy ny fahafahana vaovao mipoitra ho an'ny marika hampiasa ny influencers mba hampitombo ny paikadin'izy ireo ara-barotra sosialy.
Ny 70% amin'ireo mpampiasa aterineto amerikana dia mety hividy vokatra amin'ny influencers arahin'izy ireo, miaraka amin'ny fiakaran'ny varotra ara-tsosialy amerikana amin'ny totalin'ny 35.8% mihoatra ny 36 miliara dolara in 2021.
antontan'isa ary Insider Intelligence
Saingy noho ny fitomboan'ny fahafaha-manao fanohanana ho an'ny influencers, dia tsy azo ihodivirana ny fidiran'ny fidirana ao amin'ny habaka efa feno, ka vao mainka sarotra ho an'ny marika ny hahita ilay influencer mety hiarahana miasa. Ary ho an'ny fiaraha-miasa amin'ny marika influencer ho mahomby indrindra amin'ny mpihaino kendrena dia tena ilaina ny fiaraha-miasa mba ho tena izy, mifototra amin'ny tombontsoa sy tanjona ary ny fomba. Ny mpanara-dia dia afaka mahita mora foana amin'ny alàlan'ny lahatsoratra tohanan'ny mpanohana tsy marina avy amin'ny influencers ary miaraka amin'izay koa, manana ny haitraitra ny influencers amin'ny fandavana ny fifanarahana fanohanana izay tsy mifanaraka amin'ny marika manokana.
Ho an'ny marika iray hananganana fifandraisana maharitra amin'ireo mpanentana tsara indrindra amin'ny fampielezan-keviny, amin'ny resaka laza sy ROI, dia tokony hitadidy ireto toro-hevitra manaraka ireto izy ireo rehefa mifandray amin'ireo mpikatroka iriny indrindra:
Tadiavo ny influencer alohan'ny hidiranao
Mampiasà fitaovam-pikarohana sy fampahalalam-baovao mba hamantarana ireo influencers izay mifanaraka amin'ny mpihaino kendrenao ary mifandray amin'ny marikao. Ny 51% amin'ny influencers dia milaza fa ny antony lehibe indrindra tsy ahafahan'izy ireo miara-miasa amin'ny marika manatona azy ireo dia noho izany tsy tiany na tsy misy vidiny ny marika. Ny fandrindrana lisitr'ireo influencers izay mifandray marina amin'ny soatoavin'ny marika dia hisy fiantraikany tsara indrindra amin'ny fampielezan-kevitra, satria ny lahatsorany dia ho azo antoka kokoa amin'ny mpihaino azy, ary mety hiara-miasa aminao izy ireo amin'ny voalohany.
Ny marika koa dia tokony ho mazoto amin'ny fanombanana ny kalitaon'ny mpihaino ny influencer satria maro ny kaonty mety manana mpanaraka tsy marina. 45% amin'ny kaonty Instagram manerantany no andrasana bots na kaonty tsy mavitrika, ka ny famakafakana ny fototry ny mpanaraka ny influencers ho an'ny tena mpanaraka dia afaka miantoka ny tetibola lany ho tonga amin'ny tena mpanjifa mety.
Ataovy manokana ny hafatrao
Ny influencers dia tsy manana fandeferana, ary tsy tokony ho izy ireo, rehefa tonga amin'ny fanatonan'ny marika miaraka amin'ny hafatra amin'ny fomba mahazatra, tapaka ary mametaka, tsy misy fanavahana azy ireo na ny sehatra misy azy. 43% no nilaza fa izy ireo tsy mahazo hafatra manokana na mahalana mihitsy avy amin'ny marika, ary miaraka amin'ny fahamaroan'ny mpanentana vaovao mirona mizara amin'ny Internet, ireo marika dia afaka mampiasa izany mora foana amin'ny tombony ananany mba hampifanarahana ny haavony.
Ny marika dia tokony handany fotoana sy hery amin'ny famakiana ny votoatin'ny influencers idealy mba hamoronana hafatra mifanaraka amin'ny influencer tsirairay, mifanaraka amin'ny tonony sy ny fombany. Izany dia hampitombo ny mety hisian'ny influencer resahina amin'ny fiaraha-miasa, ary ho voatosika kokoa handefa votoaty mahasarika.
Aoka ho mangarahara amin'ny fanentanana voalohany ataonao
Aza mifofofofo - ny mazava, ary ny mangarahara no zava-dehibe rehefa manolotra ny fepetran'ny fiaraha-miasa amin'ny influencer ianao. Rehefa manatanteraka ny fanentanana voalohany ianao dia aoka ho azo antoka ny hiresaka momba ny rafitra mialoha ao anatin'izany ny antsipiriany manan-danja toy ny hoe inona ny vokatra, ny fandaharam-potoana handefasana, ny teti-bola ary ny entana andrasana. Izany dia ahafahan'ny influencer mandray fanapahan-kevitra tsara kokoa, haingana kokoa ary mamela ny roa tonta hisoroka ny fifanolanana eny an-dalana.
Tena ilaina ny mamely ny feo tsara amin'ny fifandraisany amin'ireo mpikatroka tiana mba hahazoana antoka fiaraha-miasa manan-danja sy tena izy ary hanatsara ny fampielezan-kevitr'izy ireo. Satria mbola miroborobo ny indostrian'ny marketing influencer, mila mifanaraka amin'izany ny marika.
Tags: ahoana nony fomba hifandraisana amin'ny influencersAhoana ny fametrahana ny influencerhypeauditorhery miasa manginamarketing marketing
Alexander dia CEO sy mpiara-manorina amin'ny HypeAuditor. Alex dia efa ekena imbetsaka tao amin'ny lisitry ny mpilalao indostrialy 50 Top by Talking Influence ho an'ny asany hanatsarana ny mangarahara ao anatin'ny indostrian'ny marketing influencer. Alex no mitarika ny fanatsarana ny mangarahara ao anatin'ny indostria ary namorona ny rafitra fisandohana fisolokiana avo lenta indrindra AI hametraka ny fenitra hanaovana ny marketing marketing influencer, mangarahara ary hahomby.
Torohevitra 5 hampitomboana ny tahan'ny fiovam-po amin'ny dokam-barotra amin'ny horonan-tsary
Tokony hanao ireto zavatra telo ireto ireo marika maniry ny hifanerasera